..........: PDF Printer ( for Making Ebook )
ကျွန်တော်တို့ family ရဲ့ သီချင်းလေးတွေပါ
PDF Printer ( for Making Ebook )
ကျွန်တော်က ဒီ software နဲ့ ebook လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ .. ဘလော့တွေကို သဘောကျလို့ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ebook လုပ်ပြီး သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ software လေးတစ်ခုပါ .. သူ့ရဲ့သဘောတရားကတော့ စာရွက်နဲ့ print ထုတ်ပေးတဲ့အစား .pdf ဖိုင်နဲ့ ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် တော်တော်များများကို pdf ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် .. ဖိုင်ကလည်း ပေါ့တော့ ဒေါင်းရမြန်ပါတယ် .. ကျွန်တော့် အချစ်တော်လေးပါ ...
Download Me !
နောက်တစ်ခုကတော့ pdf ဖိုင်တွေကို ပေါင်းပေးတာပါ .. ဒါကတော့ မဒေါင်းလည်း microsoft word ရှိရင် ကိုယ်ကူးမယ့် ဘလော့တွေကို microsoftword ထဲကူးထည့်ပြီး အဲ့ထဲကပဲ print ထုတ်လည်း အဆင်ပြေတာပဲလေ ... ဒါပေမယ့် လိုလိုမယ်မယ် လိုချင်ရင်တော့ဒေါင်းပါ ..
Download Me ! ( PDF Merge )
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ pdf file ကနေ word , excel , pdf , jpg စတဲ့ file type တွေကို ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် .. သူက မြန်မာဖောင့်ပါတာဆိုရင်တော့ နည်းနည်း ပြဿနာရှိပါတယ် .. ကဲလိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းပါ ...
Download PDF to ALL FILE
( snake ; wytusnake.blogspot.com )
IT POST (17)
Linux OS အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံ (မြန်မာလို)
Excel 2007 မြန်မာလို
Learning Web Design ( မြန်မာလို)
Virus ရေးသားနည်း နှင့် ကာကွယ်ခြင်း
window7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ (မြန်မာလို)
cracker Guide 2.1
Corel Draw အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Video တည်းဖြတ်နည်း စာအုပ်များစွာ
ရိုးသားစွာထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း (honest hacking)
window server 2003 & 2008 (မြန်မာလို)
isa server 2006 ပြုလုပ်ပုံစာအုပ် မြန်မာလိုနှင့် mo...
Database အကြောင်း မြန်မာလို
ccproxy အသုံးပြုနည်း စာအုပ် (မြန်မာလို)
video တည်းဖြတ်ရေးအတွက် Ulead Video Studio6(မြန်မ...
Deep Freeze ထည့်သွင်းခြင်း (မြန်မာလို)
Linux OS အကြောင်း (မြန်မာလို)
Ubuntu အကြောင်း ( မြန်မာလို )
Front Page 2002 (မြန်မာလို)
Data communication (မြန်မာလို)
MY SQL အသုံးပြုနည်း
NetMeeting 3.0.1 အကြောင်း
Microsoft Word , Excel , Acess မြန်မာလို စာအုပ်မျ...
သင့်ဝဘ်ဆိုက် loading မြန်စေဖို့
E-mail Server မြန်မာလို
Video Conferening Server မြန်မာလို
Vbulletin Cracked Version Installation in Local Ho...
Turbo C Programming စာအုပ်
Streaming Server မြန်မာလို
Silver Strip Installation in Local Host
SDLC ( SOFTWARE DELOPMENT LIFE CYCLE )
Remote Desktop Enviroment (Real VNC V4.1.1)
SMALL HOME OR OFFICE NETWORKING
ဓာတ်ပုံ size ကြီးရန် ( without losing quality )
GMAIL မပွဖို့ GMAIL Filter လုပ်နည်း
Dos Command မြန်မာလိုစာအုပ်
MIRC Chat စာအုပ်လေးပါ
Laptop Service & Knowledge Guide စာအုပ်
Zawgyi Font ကို 64bits မှာ Type လို့မရသူများအတွက် ...
Blog Spot မှာ See More ထည်တာလေး
Solid Work 2004 ( Software ; Portable )
ဦးဇော်လင်းရေးသားတဲ့ A+ စာအုပ်
Window ရဲ့ Firewall အကြောင်းရေးထားတာလေးပါ
Gmail အကြောင်း သေချာသင်ထားတဲ့ Gmail Tips & Tricks
Hardware Knowledge & Management မြန်မာလို
Hardisk ပျက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ
Blue Screen ပေါ်လာရခြင်း အကြောင်းအရင်း
HTML စာအုပ် ( Small File Size Version )
Internet Connection Sharing ( ICS ) မြန်မာလို စာအု...
အင်တာနက် အလုပ်လုပ်ပုံ ( ကိုရဲ )
ကိုကောင်လေးရဲ့ blogspot များ
CMS ( content management system ) မြန်မာလို စာအုပ်...
ကွန်ပြူတာမ၀ယ်ခင် ဖတ်ဖို့ စာအုပ်
Bat File Programming စာအုပ် မြန်မာလို
Photoshop သင်ခန်းစာလုပ်ဖို့ Ashampoo Snap 4.3.0
Acronis True ImageWorkstation and Server how to ba...
Word Press စာအုပ်များစွာ
Basic Hacking By Bigg Nay
ကိုမောရစ်စ် ရေးထားတဲ့ Dolphin Installation Guide
A+ ကွန်ပြူတာပြုပြင်နည်းစာအုပ် ( မျိုးသူရ )
Photoshop Lesson များ အားလုံး ( မြန်မာလို )
Adobe Pagemaker 7.0 နဲ့ မွေးနေ့ဖိတ်စာလုပ်နည်း
Adobe Acrobat သုံးနည်း စာအုပ်
HTML စာအုပ် ( Perfect guide ; but Big File Size )
Java Programming စာအုပ်
စနောက်ဖို့ Virus ရေးနည်း
Window7& Vista & XP တင်နည်းစာအုပ်
Fluity Loop တီးနည်း ( need myanmar font disc )
Dangerous Virus ရေးနည်း2နှင့် ကာကွယ်နည်း
Dangerous Virus ရေးနည်း
Window Shortcut များစာအုပ်
Flash Game လုပ်နည်း
blogspot ပြုလုပ်နည်း နှစ်အုပ်
blogspot မှာ favicon ထည့်မည်
ကိုယ်နဲ ကိုယ်ချစ်သူတိုမွေးလာမဲ့ ကလေးရဲ ပုံစံလေးကို...
Offline Sign out or Log Out-လုပ်နည်း
မန္တလေးသူများ ဘာကြောင့် ကျနော်လို့ပြောဆိုကြတာလဲ?
THE COLLEGE CYCLE
ကောင်မလေး တွေသဘောကျမယ့် talky (၁၀) ခွန်း
ရယ်စရာ by ( http://answerfriends.multiply.com )
Galk မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ ?
If U Copy My Blogs , plz subscribe my blog link. Picture Window theme. Theme images by fpm. Powered by Blogger.